Lawa ngamaqela eqela afunyenwe kwitheyibhile yenkcazelo yezinto. Kukho iziqhagamshelwano kwiintlobo zezinto ngaphakathi kweqela ngalinye.
I-Cobalt yintsimbi elukhuni, i-silvery-grey. Ben Mills
Uninzi lwezinto zintsimbi. Enyanisweni, ezininzi izinto zinesinyithi kukho amaqela ahlukeneyo ensimbi, njengezinyithi ze-alkali, umhlaba we-alkaline, kunye neenguqu zentsimbi.
Uninzi lwezinyithi zizinto eziqhambileyo, ezinamaqondo aphezulu kunye neengxaki. Zininzi zeepropati zezitye, kuquka i-radius enkulu i-atomic , amandla e-ionization aphantsi , kunye ne-electronegativity ephantsi , ngenxa yokuba i-electron kwiigolane ze - valence ze-atom zetsimbi zingasuswa kalula. Esinye isici sesinyithi siyakwazi ukukhubazeka ngaphandle kokuphula. Ukungaphumeleli kukukwazi ukwenza isinyithi ukuba ifakwe kwintsimbi. I-Ductility yikhono lokwenza isitrato esiza kutsalwa kwi-wire. Izitshixo zihamba kakuhle kunye nabaqhubi bombane. Kaninzi "
Ezi zi-crystals ze-sulfure, enye yezinto ezingezantsi. Survey Geological Survey
Ama-nonmetals afumaneka kwicala lasekunene letafile yexesha. Ama-Nonmetals ahlukaniswe kwizinyithi ngomgca onqumla kwi-diagonally kummandla wetafile yexesha. Ama-Nonmetals anamandla amakhulu okuvuselela i-ionisation and electronegativities. Ngokuqhelekileyo abaqhubi abahluphekileyo bokushisa nombane. Iimpawu ezingapheliyo eziqhelekileyo zivame ukuba zincinci, ezincinci okanye zingabikho zincinci zensimbi . Uninzi lwama-nonmetals lunako ukufumana ama-electron kalula. Iimpawu ezingabonakaliyo zibonisa uluhlu olubanzi lweemveliso zeekhemikhali kunye nokusebenza kwakhona. Kaninzi "
IGesi eziNgcono okanye iGesi ezingenayo
I-Xenon ngokuqhelekileyo igesi engenambala, kodwa ikhipha ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka xa ixhaswa ngumkhuhlane wombane, njengoko kuboniswe apha. pslawinski, wikipedia.org
Iigesi ezihloniphekileyo, ezibizwa ngokuba njengegesi ezikhukhulayo , zifumaneka kwiQela VIII yetafile yexesha. Iigesi ezihloniphekileyo ziyizinto ezingasebenzi. Oku kungenxa yokuba banesigoboliso esigqibeleleyo se-valence. Abanomdla wokufumana okanye ukulahlekelwa ngama-electron. Iigesi ezinobungqina zinamandla amakhulu e-ionisation kunye ne-electronegativity. Iigesi ezinobungqina zinamaphuzu aphantsi abilayo kwaye zonke iigesi kwindawo yokushisa. Kaninzi "
Le isampuli yegesi echlorine ecocekileyo. Igesi le-chlorine ngumbala ophuzi obomvu obomvu. I-Greenhorn1, ummandla woluntu
Ihaloji zifumaneka kwiQela VIIA yetafile zexesha. Ngamanye amaxesha ii-halogen zibhekwa njengento ekhethiweyo ye-nonmetals. Ezi zinto zisebenzayo zinama-electron asixhenxe. Njengeqela, i-halogen ibonakalisa iipropati ezibonakalayo ezibonakalayo. I-Halogens ukusuka kwindawo eqinile ukuya kwi-liquid ukuya kwiqondo lokushisa . Iipropati zeekhemikhali zifana kakhulu. I-halogen zinokuphakanyiswa kwamagunya aphezulu . I-Fluorine ine- electronegativity ephezulu yezinto zonke. I-halogen ziyakwenza ngokuthe ngqo ukusebenza kunye neensimbi ze-alkali kunye nehlabathi le-alkaline, ukwakha i-crystals eqinile. Kaninzi "
IiSimimetals okanye i-Metalloids
I-Tellurium i-metalloid e-silver-white white. Lo mfanekiso ngowona-ultra-pure pure tellurium crystal, 2-cm ubude. Dschwen, wikipedia.org
I-metalloids okanye i-semimetals zikho phakathi komgca phakathi kweesinyithi kunye nee- nonmetals kwitheyibhile yamaxesha . I-electronegativity kunye ne-ionization yamandla ase-metalloids ziphakathi kwezo zinyithi kunye nee-nonmetals, ngoko i-metalloids ibonisa iimpawu zombini. I-reactivity ye-metalloids ixhomekeka kwinqanaba apho basabela ngayo. Ngokomzekelo, i-boron yenza njengento engaphelelangayo xa isabela nge-sodium kodwa njengesinyithi xa isabela nge-fluorine. Amaphunga abilisayo , amanqaku aqhaqhaqhaqhayo , kunye nokuxinwa kwe-metalloids ziyahlukahluka. I-conductivity esebenzayo ye-metalloids ithetha ukuba bavame ukwenza i-semiconductors enhle. Kaninzi "
I-sodium metal chunks phantsi kweoli ye-mineral. U-Justin Urgitis, wikipedia.org
Iimbali ze-alkali zizinto ezikhoyo kwiQela IA yetafile yexesha. Iimbali ze-alkali zibonakalisa ezininzi iimpahla eziqhelekileyo eziqhelekileyo kwizinyithi, nangona ubunzima babo buncinci kunezinye izinyithi. Izinyithi ze-alkali zinomnye wee-elektroni kwinqabileyo yazo yangaphandle, eboshwe ngokukhululekile. Oku kubanika i-radii enkulu ye-athiki yezinto kwixesha lawo. Amandla abo aphantsi kwe-ioni aphumela kwiimpawu zabo zetsimbi kunye nokusebenza okuphezulu. Intsimbi ye-alkali inokulahlekelwa lula i- elektron i-valence yayo ukuze yenze i-cation engekho. Izinyithi ze-alkali zinama-electronegativity aphantsi. Basabela ngokukhawuleza kunye nama-nonmetals, ngakumbi i-halogens. Kaninzi "
Amakristali e-magnesium eyamalungu, aveliswa esebenzisa inkqubo yePidgeon yokupaka umphunga. IWarut Roonguthai
Ihlabathi le-alkaline yimihlaba ekhoyo kwiqela le-IIA yetafile yexesha. Ihlabathi le-alkaline linempahla eninzi yesakhiwo. Ihlabathi le-Alkaline linamafutha aphantsi aphezulu kunye ne-electronegativities ephantsi. Njengazo zetali ze-alkali, iipropati zixhomekeke ekuphumeni kwazo ii-electron ezilahlekileyo. Ihlabathi le-alkaline inee-electron ezimbini kwiigobolondo zangaphandle. Zine-radii encinci i-atomiki kuneetali ze-alkali. Ii-electron zombini zeeventi azixhomeke ngokuqinile kwi-nucleus, ngoko ihlabathi le-alkaline lilahleka kalula i-elektrononi ukuze lenze i- cation diationsent . Kaninzi "
I-gallium echanekileyo inombala osiqambileyo wesiliva. Ezi kristali zahlonywa ngu-photographer. Foobar, wikipedia.org
Amatshini aphezulu kakhulu asebenza ngamandla kagesi kunye nee- thermal , abonisa ukukhanya okuphezulu kunye nokuxinisa, kwaye angabonakali kunye ne-ductile. Kaninzi "
I-palladium iyinsimbi epholileyo-isilumhlophe. Tomihahndorf, wikipedia.org
Iitshintshi zenguqu zifumaneka kumaqela IB ukuya kwiVIIIB yetafile zexesha. Ezi zinto zinzima kakhulu, kunye namaphuzu aphezulu kunye namaqondo abilayo. Isinyithi esitshintshileyo sinomgangatho ophezulu wokuqhuba umbane kunye nokungasebenzi kwaye amandla angaphantsi kwe-ionization. Bakhombisa uluhlu oluninzi lweenkcukacha ze-oxidation okanye iifom ezihlawuliswe ngokuqinisekileyo. I- oxidation echanekileyo ivumela ukuba izinto zenguqu zenze izinto ezininzi ezahlukeneyo ze-ionic kunye ne- ionic . Iifom zeziqulatho zeziqulatho ezinemibala kunye nezixhobo. Izimpembelelo zemihlahlandlela ngezinye iinkqubo zithuthukisa ubuncinci bezinto ezithile. Kaninzi "
I-plutonium engummangaliso i-silvery, kodwa ifumana i-yellow tarnish njengoko ixidizes. Ifoto ifana nezandla ezigcotyiweyo eziphethe iqhosha le plutonium. Deglr6328, wikipedia.org
Imihlaba engabonakaliyo isinyithi efunyenwe kwimigangatho emibini yezinto eziphantsi kweqela eliphambili letafile yexesha . Kukho iibhloko ezimbini zehlabathi ezingabonakaliyo, uchungechunge lwe-lanthanide kunye noluhlu lwe-actinide . Ngendlela, ihlabathi elingabonakaliyo litshintshi ekhethileyo , eneeninzi zeepropati zezi zinto. Kaninzi "
I-Samarium iyinsimbi yentsimbi. Ukuguqulwa kweekristal ezintathu zikhoyo. JKleo, wikipedia.org
I-lanthanides zinyithi ezifumaneka kwibloko 5d yetafile yexesha. Isiqalo sokuqala sesi-5d sinokuthi i-lanthanum okanye i-lutetium, kuxhomekeke kwindlela ochaza ngayo iimeko zenkqubela yezinto. Ngamanye amaxesha kuphela i-lanthanides, kwaye ayikho i-actinides, ihlelwa njengemihlaba engaqhelekanga. Iifom ezininzi ze-lanthanides ngexesha le-fission ye-uranium kunye ne-plutonium. Kaninzi "
I-uranium iyinsimbi enombala. Ifoto yi-billet ye-uranium ephucukisiwe kakhulu efunyenwe kwi-scrap eqhutywe kwi-Y-12 Indawo e-Oak Ridge, TN. Isebe leMandla laseMerika
Uqwalaselo lwekhompyutheni lwe -actinides lusetyenzisa le nto. Ngokuxhomekeke kwingcaciso yakho yexesha leempawu, uluhlu luqala nge-actinium, thorium, okanye nakwezomthetho. Zonke i-actinides zizinsimbi ezinomsoco ezinomsoco ophezulu. Baqhayisa ngokukhawuleza emoyeni kwaye badibanise neeninzi ezingaphelelanga. Kaninzi "
I-Carburetor Ukulinganisela Ukusebenzisa i-Vacuum Gauges
Zingaphi Iintlobo Zeempendulo Zomkhiqizo Zikhona?
Ukudibanisa isenzi sesiJamani sehen, esithi 'ukubona'
Indima yamaMama eSilamsi
Imibuzo yeeKholeji zeKholeji
Iintlanganiso: Ukwenza umculo omhle ndawonye
I-Ramadan ephezulu: Iincwadi zeBadala